Iko kushanda kunosora chinzvimbo chepamhepo muWhatsApp pane Android chinoshanda sei Android ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Android Pop ▷ ➡️
Press ESC kuvhara
Iko kunyorera kunotsvaga pamamiriro epamhepo muWhatsApp pane Android kunoshanda sei
1 Kuverenga Min
Iko kunyorera kunotsvaga pamamiriro epamhepo muWhatsApp pane Android kunoshanda sei, muGoogle Play Store mune imwe application iyo inobvumidza kushora pamamiriro epamhepo evanoshamwaridzana akachengetedzwa muWhatsApp. Kubudikidza nechikumbiro ichi, chatisingazokupe zita kana chinongedzo chinokurumidza kurodha pasi, mushandisi anogona kuziviswa kana mumwe munhu wekubata (kana rondedzero yevanobata) achiisa mukati memeseji yekushandisa.
Paunenge wapinda iyo nhamba yefoni yeWhatsApp yekutaurirana iwe yaunoda kusorala application inotumira ziviso pese panopinda munhu akabuda mukushandisa. Zvese izvi ruzivo zvinongoerekana zvaiswa mune rezuva rekodhi, kwazviri zvinoita kuti uone kuti mumwe mushandisi anga ari online zvakadii uye nemazuva api.
WhatsApp spy app online chinzvimbo chinongedzo
Mushandisi anoshandisa chishandiso ichi haazongozvibata kunge spy chaiyo, asi zvakare inobvumidza kambani yekunze kuti ichengetedze nhamba yefoni yemunhu wacho kumaseva ayo, nezvose zvinosanganisira.
Tariro yedu ndeyekuti Google ichaita nekukurumidza sezvinobvira kubvisa zvachose iyi purogiramu kubva kuGoogle Store.
Ungazvidzivirira sei kubva kune WhatsApp spy app
Kwenguva yakati ikozvino, zvinokwanisika kumisikidza yako account ku viga chinzvimbo chako chepamhepo paWhatsApp. Kuti ubvise pakarepo spy apps kana zviitiko zveavo vari kutsvaga kuti tione kushandisa kwedu app, ingo tevera nhanho diki idzi:
Unganidza icon pamwe nematombo matatu kumusoro kwekurudyi;
Bata Akaunti, Yakavanzika, Yekupedzisira Kuwana;
Kubva pano sarudza "Zvese", "Vangu Vafoni" uye "Hapana".
Isu tinokuyeuchidza iwe kuti nekumisikidza "hapana" hauchakwanise kuona yekupedzisira kuwana kwevanobata muWhatsApp.
Siya mhinduro Misa mhinduro
Sevha zita rangu, email uye webhusaiti mune ino browser kune inotevera nguva ini yandinotaura.
Iwe unogona zvakare kufarira
Duet Ratidza rinotendera iyo Android chishandiso kuti ishandiswe sechipiri kuratidza kwePC
Ndeapi maapplication anofanira kunge akafanogadzwa-kuiswa pane Android 10 uye Go
Mashandiro anoita Facebook Kudzivirira Hutano paApple
Mashandiro anoita Google Files pane zvishandiso zveApple
Maitiro ekukurumidza kuwana Google Pay ne Android 10
Yakanakisa vhidhiyo mupepeti we Android. Chii ichochi?
Maitiro ekuisa Android 12 dhizaini pafoni yako
Maitiro ekupinza nharembozha yeAndroid neGoogle Lens
Chii chinonzi Genshin Impact uye maitiro ekutamba
Google Pixel 6 ine kamera ipi uye ndeyei chaizvo